काठमाडौं । दुई नम्बर प्रदेशको भूभागअन्तरगत रहेको नेपालको मधेस नेपाली कांग्रेसको आधार क्षेत्र हो कि कम्युनिष्टहरुको ? वा यो प्रदेश क्षेत्रीय-जातीय पार्टीहरुको आधार क्षेत्र हो ? आउनुहोस् यस विषयमा ०४८ साल यताको करिब २६ वर्षको इतिहास खोतलौं-
हुन त मधेसमा कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुको जनाधारको चर्चा गर्दा ०४८ सालभन्दा अगाडि जानुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसबेला दलीय आधारमा चुनाव नहुने भएकाले पञ्चायतकालीन मधेसको राजनीतिलाई गणितका आधारमा व्याख्या गर्न गाह्रो छ ।
राणाविरोधी आन्दोलनका बेलादेखि नै मधेसका जनताले निरंकुशताविरुद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा लडेका थिए । पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध कैंयौं मधेसी जनताले वलिदानी दिए । कतिपय मधेसी जनताले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बलिदानी दिए भने कैंयौं नेता- कार्यकर्ताहरुले कम्युनिष्ट आस्थामा रहेर .............